ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် (၁၁၅) နှစ်မြောက် အခမ်းအနားမှ ပြန့်လွင့်လာသည့် အသံများ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် (၁၁၅) နှစ်မြောက် အခမ်းအနားမှ ပြန့်လွင့်လာသည့် အသံများ
ဇန်န၀ါရီလ ၂၅၊ ၂၀၁၃
ဦးမြင့်ဝေ (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးပါတီ -လျှောက်ထားဆဲမှ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး)
ယခုလ ၂၀ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အာဇာနည်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဂုဏ်ပြုပွဲနှင့် ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ၁၁၅ နှစ်မြောက် အခမ်းအနား နှင့် ပတ်သက်၍ M-Media မှ ရန်ကုန်မြို့မှ တက်ရောက်လာသူ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးပါတီ -လျှောက်ထားဆဲမှ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးမြင့်ဝေနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
“အာဇာနည်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဂုဏ်ပြုပွဲနှင့် ဆရာကြီးဦးရာဇတ် (၁၁၅) နှစ်မြောက် အခမ်းအနားကြီးကို အခုလိုခမ်းခမ်းနားနား စည်စည်ကားကား ကျင်းပနိုင်အောင် စီစဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အထူးကျေးဇူးတင် မှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး မရခင်က အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ခေတ်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြားဘဲ တိုင်းပြည်အတွက် အနစ်နာခံဆောင်ရွက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို လူမှန်နေရာမှန် တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော် ဦးကုသလကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဆရာကြီးဦးရာဇတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုသဘောထားပါသလဲလို့ လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာ ဆရာတော်မှ “မန္တလေးမှာ ဖဆပလ အဖွဲ့ ဖွဲ့ဖို့လိုက်ပြောတဲ့အခါမှာ ဘယ်သူမှ လက်မခံကြဘူး။ ဆရာကြီးဦးရာဇာတ်ကိုပြောတော့ အမျိုးသားရေးဖြစ်တဲ့အတွက် တာဝန်ယူမယ်လို့ ဆရာကြီးကပြောပြီး တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အနစ်နာခံဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ဆရာကြီးဦးရာဇာတ်ကိုပဲ ဥက္ကဌ တာဝန်ပေးသင့်တယ်လို့ မိန့်ကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဆရာကြီးဦးရာဇာတ်ကို ဥက္ကဌ၊ လူထုဦးလှ ကိုအတွင်းရေးမှူးတာဝန်ပေးပြီး ဖဆပလ ခရိုင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကြီးများကလည်း ဆရာကြီးဦးရာဇာတ်ကို ၀န်ကြီးတာဝန်ပေးဖို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆီ စာရေးပြီးတိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အဲဒီစာကို ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်မှာ တင်ပြပြီး အများသဘောတူ ဆရာကြီးဦးရာဇာတ်ကို ၀န်ကြီးတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်” ဟု M-Media သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဘုရင်ခေတ်က ပသီလူမျိုး ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့လက်အောက် ကျရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဗမာမွတ်စလင်လို့ အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ ဆရာကြီးဦးရာဇာတ်အပါအ၀င် ကျွန်တော်တို့ ဗမာမွတ်စလင် ပသီလူမျိုး အဆက်အနွယ်တွေဟာ ဘုရင်ခေတ်၊ ကိုလိုနီခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းတဲ့ခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်၊ ရန်ကုန်အစိုးရလို့ အခေါ်ခံရတဲ့ခေတ်၊ အိမ်စောင့်အစိုးရခေတ်၊ ၈၈ အရေးအခင်းတွေမှာ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် အသက်၊ သွေး၊ ချွေး ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်”
“ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့ကို လက်နက်စွဲကိုင် တော်လှန်ခဲ့တဲ့ ဆရာစံရဲ့ ဂဠုန်တပ်သားကြီး ဦးဒူးဒူးဟာ တိုင်းရင်းသား မွတ်စလင်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့နဲ့အတူ နယ်ချဲ့လက်ပါးစေရဲ့လုပ်ကြံမှုကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်နဲ့ ရဲဘော်ကိုထွေးတို့ ဟာလည်း တိုင်းရင်းသား မွတ်စလင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ကြီးဦးနုရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ရဲ့ ဗိသုကာ ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျဆုံးပြီးနောက် ဌာနလက်ကိုင်မရှိ ၀န်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ပေးခံရတဲ့ ဦးဖေခင်ဟာလည်း တိုင်းရင်းသား မွတ်စလင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့မှာပါတဲ့ ၀န်ကြီးဦးရာရှစ်၊ ဦးခင်မောင်လတ် တို့ဟာလည်း မွတ်စလင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးအခင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့အတူ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေ ဘက်ကရပ်တည်ထောက်ခံပြီး ထောင်ထဲမှာကျဆုံးသွားတဲ့ မောင်သော်က (ခ) ဗိုလ်မှူးဘသော် ဟာလည်းတိုင်းရင်းသား မွတ်စလင်တွေပါ။ တိုင်းရင်းသား မွတ်စလင်တွေဟာ ခေတ်တိုင်း ခေတ်တိုင်းမှာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အသက်၊ သွေး၊ ချွေး ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ ဆုလာဒ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်က စတင်ပြီး လုပ်မြေ၊ နေမြေ နဲ့ အတည်တကျနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား မွတ်စလင် လူ့အစုအဝေးကြီးကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုးထဲက ဖြုတ်ထားတဲ့ ဆုလာဒ်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု M-Media သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
“၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်တာနဲ့ ပတ်သပ်ပြီး ဆက်စပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ၁၉၇၂ခုနှစ်က ပြည်ထဲရေးနဲ့ ဘာသာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြုစုခဲ့တဲ့လူမျိုး ၁၄၄ မျိုး စာရင်းထဲမှာ အမှတ်စဉ် ၁၃၉မှာ မြန်မာ-မွတ်စလင် ပါဝင်ပါတယ်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ သန်ခေါင်စာရင်းကောက်ခံတော့ လူမျိုး၉ မျိုးကိုဖြုတ်ပြီး ၁၃၅မျိုးသာ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြုတ်တဲ့ (၉)မျိုးထဲမှာ မြန်မာ-မွတ်စလင်ဆိုတာ ပါဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အမှန်ရှိတဲ့ လူမျိုးစုတွေကို လူမျိုးစုစာရင်း မှာ ပြန်လည် ထည့်သွင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်”
“ဆရာကြီးဦးရာဇတ်က စည်းကမ်းရှိတာ ကြိုးစားတာ အမျိုးချစ်တာ ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ လူငယ်တွေစည်းကမ်းရှိအောင် ပညာကြိုးစားအောင် အမြဲတိုက်တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားလူငယ် အနေနဲ့လည်း ဆရာကြီးဦးရာဇတ် ရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်” ဟု M-Media သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
This entry was posted on January 26, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မွှေးပျံ သင်းကြိုင် ရနံ့စုံ လှိုင်တဲ့နေ့
ရာဇ၀တ်မှုများ တိုးပွားလာခြင်းကို ထရီနီဒက် မွတ်စလင်များ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ →